Pep Guardiola Oo Xaqiijiyay Inuu Dhabarka U Ridan Doono Cilad Kasta Ee Kooxdiisa Ku Timaada Xili Ciyaareedkan Cusub. – WWW.Gool24.net
21/08/2017 Abdulkadir Dajiye
Macalinka kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ku adkeesanaya inuu lahaan doono awooda ah inuu dhabarka saarto, culeys kasta ee dheeri ah ee laga filan karo Manchester City xili ciyaareedka haatan bilawga maraya.
Pep Guardiola ayaa si wanaagsan kaga war qaba in maamulka kooxda Manchester City ay xili ciyaareedkan kaga fadhiyaan in kooxda uu ku hogaamiyo guulal waaweyn oo muhiim ah, kadib natiijo xumadii ay ku dhameysteen xili ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Tababaraha ree Spain ayaa kahor kulanka ay caawa kusoo dhaweyn doonaan Etihad Stadium kooxda Everton wuxuu ka dhawaajiyay: “Waxaan xili hore u sheegay inay jirto rajo isku mid ah ee laga filan karo sida xili ciyaareedkii hore oo kale, isla rajadii xili ciyaareedyadii lasoo dhaafay, marka laga reebo bilihii ugu horeeyay ee kooxda Barcelona, maadaama aanan heysan kalsoonida mid kasta ee ka tirsan kooxda Barcelona, sababa la xidhiidha xirfadeyda oo ahayd mid cusub”.
Guardiola ayaa hadalkiisa intaa kusii daray: “waxaan la fal gali karaa xaladaha taagan, sababtoo ah waxaan ka heystaa waayo-aragnimo wanaagsan in ka badan hal jeer”.
Pep ayaa hadalkiisa kusoo xidhay: “Bayern Munich, waxaan kula guuleystay 3 jeer ee xidhiidh ah horyaalka Bundesliga, waxaan sidoo kale lasoo gaadhay wareega 4 dhamaadka Champions League-ga tiro 3 jeer oo xidhiidh ah, waxaan ku soo arkay Bayern Munich isla mid la mid ah cadaadiskan oo kale, waxaana si wanaagsan u garanayaa sida lala fal galo”.